Semalt तपाइँको परियोजना मोबाइल मैत्री राख्न सुझावहरु निर्दिष्ट गर्दछ
विगत २० बर्षमा, मोबाइल उपकरणहरूले द्रुत दरमा वेब सामग्री ब्राउज गर्न डेस्कटपहरू बदल्दै आएका छन्। यस कारणका लागि, प्रायः गुगल जस्ता खोजी ईन्जिनहरूले खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनमा परिवर्तन गरे जुन उनीहरूको खोज प्रश्नहरूमा उच्च श्रेणीकरण गर्न सकिन्छ। व्यवसायहरूले यस दृष्टिकोणलाई डिजिटल मार्केटि means माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेर यसको ब्राण्डको दृश्यता विश्वव्यापी रूपमा धेरै उपभोक्ताहरूको लागि बढाउने फाइदा लिन सक्दछ। यद्यपि व्यापार र वेब विकासको लागि यो अवधारणा लागू गर्नु सजिलो कार्य होइन।
निम्न कारकहरू, Sevant डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक इवान कोनोवालोभले परिभाषित गरेका छन्, मोबाइल उपकरणमा तपाईंको एसईओ बढाउने:
पप-अपजस्तो धेरै धेरै इंट्रसिभ इन्टर्स्टिटलहरू;
सानो फन्ट (सिफारिश मान १ 16 pt हो);
फ्ल्यास (अधिकांश मोबाइल ब्राउजरहरूमा समर्थित छैन। यसले लुकेको सामग्रीको दण्ड लिन सक्छ);
प्राविधिक त्रुटिहरू र बगहरू;
700 भन्दा बढी शब्दहरूको अत्यधिक शब्द गणना;
गरीब साना टच एलिमेन्टहरू जस्तै बटनहरू र चेक बक्सहरू;
अन्य साइटहरूको बाह्य लिंकहरूमा कुञ्जी शब्दहरू राख्नु;
अत्यधिक आन्तरिक लिंकहरू (डेस्कटप मुनि 75% हुनुपर्दछ)।
माथिका कारकहरू तपाईंको मोबाइल एसईओको लागि खराब हुन सक्छ, र तिनीहरूले तपाईंको वेबसाइट तल तान्नेछन् यदि राम्रोसँग समायोजित गरिएको छैन भने। यद्यपि तपाईंको मोबाइल दृश्य ब्राउजरमा केहि परिवर्तनले तपाईंको एसईओ बढाउनेछ। तपाईंको मोबाइल उपकरण दृश्यका लागि निम्न परिमार्जनहरू आवश्यक छन्:
१. तपाईको साइटको गति बढाउनु राम्रो छ।
गुगलले छिटो मोबाइल लोड समय गतिलाई प्राथमिकता दिन्छ किनकि यसले प्रयोगकर्ताको प्रभाव र वेबसाइटको प्रयोगलाई असर गर्छ। मोबाइल र्यान्किंग कारकहरूको अध्ययनमा सर्च मेट्रिक्सले रिपोर्ट गरेको छ कि १.१० सेकेन्डको लोड समयले साइटलाई १० मा स्थान दिन सक्छ तर मोबाइल उपकरणमा १.१17 सेकेन्डको मात्र ड्रपले स्थिति 35 35 भन्दा कममा ल्याउन सक्छ। साइट गति एक प्राविधिक कारक हो। तपाईंले आफ्नो मोबाइल पृष्ठहरूमा बढाउनु पर्छ।
२. एएमपी (एक्सेलेरेटेड मोबाइल पृष्ठ) प्रयोग गर्नुहोस्।
एएमपीको एचटीएमएल र सीएसएस कोड हुन्छ, यसको मतलब तिनीहरू क्यास लोड गर्न सजिलो छन् र फोन ब्राउजरहरूमा रेन्डर गर्नुहोस्। एएमपीको लोड times० पटक छिटो छ र रूपान्तरणहरू वृद्धि गर्न र दरहरू मार्फत क्लिक गर्ने शक्ति छ।
Around. करिब नौ वस्तुहरूको सूची प्रयोग गर्नुहोस्।
कोटीहरूको संख्या पूर्ण वेब सामग्री कभर गर्नको लागि सानो स्क्रोलको साथ राम्रोसँग फिट हुनेछ। यो प्रयोगकर्ता अनुभव कारक मध्ये एक हो गुगल एल्गोरिथ्म साइटहरू फिल्टर गर्न प्रयोग गर्दछ।
Images. छनौट छविहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
छविहरू प्रयोग गर्नु तपाईंको सन्देश प्राप्तकर्तामा सजिलो तरिकामा ड्राइभ गर्ने एउटा अचम्म तरिका हो। यद्यपि धेरै धेरै छविहरूले तपाईंलाई खराब दर्जा पनि दिन सक्दछ। चारवटा छविहरू प्रयोग गर्नुहोस् जससँग कडाईका साथ उच्च नेटिभ रिजोलुसन हुनुपर्दछ साथै न्यूनतम फाईल साइज र थम्ब क्याच लोड गर्न सजिलोको लागि। यो समायोजन तपाइँको साइट गति ड्रपिंग बाट बचाउनेछ।
Keywords. कुञ्जी शब्दहरू।
कुञ्जीशब्द खोज एक मौलिक SEO प्रविधि हो जुन तपाइँ तपाइँको सामग्रीमा रोजगार गर्न अनिवार्य छ। तपाईंको लेखहरूको मुख्य भागमा कुञ्जी शब्दहरू र सम्बन्धित वाक्यांशहरू राख्नु तपाईंको मोबाइल साइटलाई तपाईंको स्तरमा सामग्री कारक लाभ दिनेछ।
Social. सोशल मिडिया मार्केटिंग एकीकरण प्रभावी छ।
सामाजिक मिडियासँग लाखौं प्रयोगकर्ताहरू सम्म पुग्न शक्ति छ जुन सामग्री अनलाइन अनलाइन छन्। सबै अनलाइन सामग्री को More 77% भन्दा बढि सामाजिक मिडिया च्यानलहरु जस्तै व्हाट्सएप र फेसबुक मेसेन्जर स्थानीय खोज अप्टिमाइजेसन मार्फत प्रयोगकर्ताहरु मार्फत जान्छ। डेस्कटप यातायात २%% छ जब एक फोनको १ 16% छ। यो डाटाको मतलब फोनहरू ब्रान्डमा सामग्रीको लागि अनुकूलित गरिनुपर्दछ जबकि कार्ट र खरीदमा डेस्कटपहरू।